मान्छेले, मान्छेलाई बुझीदिनुपर्छ – श्रवन बोम्जन | Nepali Christians
मान्छेले, मान्छेलाई बुझीदिनुपर्छ – श्रवन बोम्जन
June 26, 2015 9:21 am by: Admin Category: Articles A+ / A-
मान्छेले मान्छेलाई बुझिदिनु पर्छ । आज नदेख्नेले भोलि देख्न सक्छ । आज मरेकाहरू भोलि बाँच्न पनि सक्छ । कसैलाई निमोठ्ने आक्रोशलाई गर्व धारण हुन नदिउ, तिनिहरू नै भोलि प्रिय बन्न सक्छन् ।
हाम्रै बिगतलाई हेरौं । हामीपनि मरेका थियौ, नदेख्ने थियौ, बदलाको गर्व बोकेर बाँचेको थियौँ । आफैले आफैलाई डोर्‍याउने सामर्थ्य हामीमा थिएन् । तर हाम्रो अभुतपुर्व प्रेमीको, प्रेमको स्पर्शले हामी फेरि नयाँ भएका छौं । ताजा भएका छौँ ।
शरिरमा, आत्मामा देखअदेखा रुपमा रूएर बिताएका हाम्रा जीवनका अतित र कसैले नबुझेको तितो वास्तविकता ढाक्ने निर्दोष बलिदानको निम्ति केही लगानी गर्ने यो असल मौका हो । यसकारण मान्छेले मान्छेलाई बुझिदिनु पर्छ । तपाईं र मलाई बुझिदिनेले, हामिलाई बुझिदिदाँ हामी कहाँ थिएनौं ? व्याभिचारमा, चोरिमा, झगडामा, घृणामा, हेलामा, पापमा, मृत्युमा कहाँ थिएनौं ? यसकारण हामीलाई बुझिदिनेको खातिर, हामीपनि कसैलाई बुझ्ने प्रयास गरौं । बुझी दिउ ।
दिनसक्ने, गर्नसक्ने यथेष्ट केही हामीसँग नहोला तर हामी माध्यम बनिदिन सक्छौं । सहयात्री, सहयोगी भएर पुलको कर्तव्य पूरा गर्न सक्छौं । गर्नेहरूलाई उत्साह दिन सक्छौं । प्रार्थना र सहयोग द्वारा सहभागिता देखाउन सक्छौं । यी सबै लगानी आफ्नै लागी हो । आफ्नै आनन्दको लागि । आफ्नै सुनिस्चित भविस्यको लागि । यसैले मान्छेले, मान्छेलाई बुझिदिनु पर्छ ।
मलाई एकजना मित्रले भन्नुभएको थियो, तपाइँ प्राय केही कामहरूमा बेस्त देखिनुहुन्छ । मैले सोचे तपाईं ठुलो मान्छे हो तर तपाईं १८०० रूपैयाँको मोबाईल बोकेर हिन्नुहुदो रहेछ… मैले भने यो मेरो आफ्नै आनन्दको लागि हो । मेरो आफ्नै सुनिस्चित भविस्यको लागि । म जे बोक्छु , मसँग जे छ यो नै मैले मेरो पिताबाट पाएको अंश हो । मैले धेरै भएर वा बढी भएर यसो गरिन । तर पुग्दो भएर नै मलाई बुझिदिनेको खातिर कसैलाई बुझ्ने प्रयास गर्दै छु । यसकारण मान्छेले मान्छेलाई बुझिदिनु पर्छ ।
भुकम्पको प्रकोपले तपाईं र मलाई यहाँ छोड्नुमा केही उदेश्य छकी ? मानवतामा इश्वर तत्व र तिनका प्रतिबिम्ब अझै बाँकी छ भन्ने सत्यतालाई देखाउने जिम्मेवारी दिइएको छकी ? यसकारण मान्छेले, मान्छेलाई बुझौं ।
आखिर यो जीवन पनि तिनकै हो । आत्मा, प्राण प्रत्येक श्वास तिनकै हो । यो आत्माको दौडमा तिनलाई नभेटे, तिनको स्पर्शलाई छुन नसके, उनलाई के जफाब दिने ?
हजारौंले चाखेका अप्रिय मृत्यूलाई सम्झ, अकल्पनीय प्रकृतिको क्रोधलाई मनन गर । मान्छे, मान्छेको युद्ध र राज्यहरूको फुट्लाई हेर, सोच, हामीसँग कति समय बाँकी होला ?
कुन कुरालाई पक्रिनु भएको छ? तपाईं जाँदा त्यो धन कसलाई दिनुहुन्छ ? लोभले कुम्लाएको त्यो महँगो, महँगो घरगहना अनि अभिलाषाका पोकाहरू कसरी लानुहुन्छ ? । यदि यो सबै यही छोडिन्छ भन्ने हामीलाई थाहा भए, के हाम्रो निम्ति बलिदान दिनेको खातिर, उहाँको निम्ति हामी केही नलाने ?
कतै जिन्दगीमा मर्म यस्तोउस्तो भन्दै, हामीले वास्तविक जीवनको मुनाफा गुमाएका त छैनौं ?। प्रियहरू मान्छेले, मान्छेलाई बुझिदिनु पर्छ । कसैलाई बुझिदिदाँ उसले बाँच्न सिक्छ । सुन्न सक्छ । देख्न सक्छ । यसकारण हामीलाई बुझिदिनेको खातिर, मान्छेले, मान्छेलाई बुझिदिनु पर्छ ।
यसबाट कसैलाई उत्साह मिल्छ जस्तो लागेमा कपि नगरी सेयर गरि दिनुहोला ।
मान्छेले, मान्छेलाई बुझीदिनुपर्छ – श्रवन बोम्जन Reviewed by Admin on Jun 26 . मान्छेले मान्छेलाई बुझिदिनु पर्छ । आज नदेख्नेले भोलि देख्न सक्छ । आज मरेकाहरू भोलि बाँच्न पनि सक्छ । कसैलाई निमोठ्ने आक्रोशलाई गर्व धारण हुन नदिउ, तिनिहरू नै भो मान्छेले मान्छेलाई बुझिदिनु पर्छ । आज नदेख्नेले भोलि देख्न सक्छ । आज मरेकाहरू भोलि बाँच्न पनि सक्छ । कसैलाई निमोठ्ने आक्रोशलाई गर्व धारण हुन नदिउ, तिनिहरू नै भो Rating: 0
धादिंगको बिकट गाउँमा पानीको ठुलो अभ...हामीले चाहे र तत्पर रहे हाम्रो परमे...